१.सरकारले ३१ जना सहसचिवको एकै पटक सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार एकै पटक ३१ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो । यसअघि रक्षा मन्त्रालयमा रहनुभएका रामप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दीर्घराज मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
२.पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणमा समान रुपले सम्बोधन नभएको बताउनुभएको छ । जसपा इलाम जिल्ला समन्वय समिति इलामले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै यादवले संविधानले सबैलाई समान सम्बोधन नगरेको बताउनुभएको हो ।
३.प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरिसकेकाे छ।
४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीबारे छलफल गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले जसपाका शीर्ष नेतासँग सत्ता सहकार्य बारेमा छलफल गर्नुभएको हो।
५.प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुन्छन् या हुन्नन भन्ने कुराकाे चर्चा हुन थालेकाे छ । कानून व्यवसायीहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएसँगै त्यसरी संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्ति खारेज हुने बताउन थालेका छन्।
६.कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको कोरियाको रोजगारी ‘प्रतिबद्ध कामदार’ (कमिटेड वर्कर) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुचारु गरिने भएको छ । कोरियाका रोजगारदाताले पुनः प्रवेश अनुमति दिएका यस्ता श्रमिक दक्ष र अनुभवी भएका कारण पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । कोरियामा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका नेपालसहित १६ देशको संक्रमण अवस्थालाई हेरेर कोरिया सरकारले रोजगारी सुचारु गर्ने जनाइरहेका बेला पहिलो प्राथमिकतामा यस्ता कामदारलाई राखिने भएको हो ।
७.जातकै कारण करुणा विश्वकर्मालाई फ्ल्याट भाडामा दिन नमान्ने घरबेटी माधवराज भुसाललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरेको छ ।
८. हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ नवलपुरमा आज बिहानै ट्रकले ठक्कर दिँदा सफारी रिक्सा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ बस्ने ३६ वर्षीय खेमलाल श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
९.उपभोग्य मिति ५ वर्ष अघि समाप्त भएको खाद्य सामग्री रहरको दाल बिक्री गरेको आरोपमा विराटनगरका एक व्यापारीलाई बुधबार ३ लाख जरिवाना गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले गरेको अनुगमनका क्रममा निखिल जैसानी बोहोरा प्रोपाइटर रहेका जैसानी ट्रेड कन्सर्न विराटनगर–७ को गोदामबाट उपभोग्य समय समाप्त भएको रहरको दाल १५ केजी तौल भएको २ हजार ७ सय बोरा बरामद भएको छ ।
१०.विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी पर्न थालेपछि बझाङको साइपाल गाउँपालिका–४ मा रहेको धुली माध्यमिक विद्यालय केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ । करिब एक सातादेखि विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक कोरोनाको जस्तै लक्षणसहित बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो ।
११.अष्ट्रेलियामा अब फेसबुकमा समाचार शेयर गरे पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाले गुगल र फेसबुकजस्ता संस्थालाई सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रयोग गरेबापत प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेपछि समाचार शेयर गर्ने व्यक्तिले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
१२. स्रोत नखुलेको २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसहित प्रहरीले दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । कलैया उपमहानगरपालिका–८ बेरुवामा चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले रकमसहित दुई जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा मोटरसाइकल चालक भारत बिहार पूर्वी चम्पारण ग्राम पञ्चायत नरकटिया–७ नरटियाका ३५ वर्षीय चंद्र शेखर प्रसाद र मोटरसाईकल सवार ३८ वर्षीय संजय कुमार रहेका छन् ।
१३.उपहार पर्‍याे भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–६ मा बसोबास गर्दै आएका पर्सा पोखरिया नगरपालिका–७ का २६ वर्षीय दिपक कुमार दुबे लगायत तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
१४.अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणका लागि १३ वर्ष मुनिका खेलाडीको छनोट गर्ने भएको छ । हाल एन्फामा आवद्ध कर्णालीका सुर्खेत र जुम्लाका जिल्ला फुटबल संघअन्तर्गत सञ्चालित ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणमा राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडी छनोट गर्न लागिएको हो ।
१५. बझाङका अमृत सिंहको हत्याका पाँच अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ का २७ वर्षीय अमृत सिंहको हत्याका पाँच अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत बझाङले मंगलबार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो ।
१६.जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडमा कार्यरत एल विवस वैरागीको अभिनयमा नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। वैरागीद्वारा अभिनित तथा चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको ‘म मरेर पनि बाँचिरहेको छु’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
१७.विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २५ लाख नाघेको छ । बिहीबार दिउँसोसम्म कोरोना संक्रमणबाट विश्वभरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २५ लाख नौ हजार आठ सय ९९ पुगेको हो । कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकाका छन् । अमेरिकामा हालसम्म पाँच लाख भन्दा बढी मानिसको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । त्यसैगरी ब्राजिलमा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने भारतमा एक लाख ५६ हजार भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
१८.नेपालकाे एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल’ काे बाहिरी स्वरूप सुन्दर बनाइएकाे छ । विमानस्थलमा प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार शान्तिकाे प्रतिक स्वरूप स्तुपा आकारको शैलीमा निर्माण गरिएकाे छ । दायाँबायाँ नेपालकाे झण्डा फहराइरहेकाे दृश्यले नेपाली मात्र हाेइन विदेशी पर्यटकहरूले पनि गर्व महसुस गरेकाे अनुभव गर्न सकिन्छ ।
१९.भीमदत्त नगरपालिकामा डेरा गरी बस्ने एक विद्यार्थीको छतबाट लडेर मृत्यु भएको छ । भीमदत्त–१८ भरतपुर बस्ने कृष्णपुर नगरपालिका–५ का १८ वर्षीय सन्तोष चौधरीको मृत्यु भएको हो । फार्मेसी अध्ययन गरिरहेका चौधरीको आफैँ बस्ने दुईतले घरको छतबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
२०.संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थल निकट रहेको रिठेपानी डाँडा ६ महिना भित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
२१.बैतडीकी १७ वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा खटिएर सफलता प्राप्त गरेका दुई प्रहरीलाई बढुवा गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमबहादुर थापालाई प्रहरी नायव निरीक्षकमा र प्रहरी जवान नरबहादुर थापालाई प्रहरी हवल्दारमा बढुवा गरेको हो ।
२२. नेपालमा थप एक सय १२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार चार सय ११ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा एक सय १२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दुई लाख ७३ हजार आठ सय ७२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आज देशभर आठ सय ८२ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
२३.पछिल्लो भागेर वा मागेर पनि २० वर्ष नपुग्दै केटाकेटीको विवाह गर्ने परिपाटिले समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । अझ भनौँ बहुविवाह हुने, सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्या, झै–झगडादेखि विभिन्न घटनाहरु समाजमा बढेको देख्न र सुन्न पाउछौँ ।
२४.नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रुपमा विभाजन नभएसम्म कुनै पनि पक्षसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्डमा बिहीबार बसेको पदाधिकार तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म सत्ता सहकार्यबारे निर्णय नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
२५.नेपाल जन–प्रशासन संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान, २०७५ बाट वरिष्ठ छाति रोग विशेषज्ञ डा. गौरी शंकर लाल दास सम्मानित हुनुभएको छ । नेपाल जन–प्रशासन संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने हेमबहादुर मल्ल सम्मान, २०७५ बाट बिहीवार एक कार्यक्रमकाबीच वरिष्ठ छाति रोग विशेषज्ञ डा. गौरी शंकर लाल दासलाई सम्मानित गरिएको हो ।
२६.उपत्यकाका विभिन्न दशभन्दा बढी सम्पदा वस्तीलाई जोडेर नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्ट विकास गर्ने अभियान ललितपुरको वुग्मती सम्पदाबाट अगाडि बढाइएको छ । कला, संस्कृतिको प्रचारप्रसार एवं प्रवर्द्धनसँगै स्थानीयको जिविकोपार्जनमा सहयोगसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाई बढाउन सम्पदा वस्तीले सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ ।
२७. नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रुपमा विभाजन नभएसम्म कुनै पनि पक्षसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्डमा बिहीबार बसेको पदाधिकार तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म सत्ता सहकार्यबारे निर्णय नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।